दाँतसम्बन्धी यी आठ अफवाहबाट बच्नुहोस्
- डा. गुञ्जना रिमाल
‘चकलेट खानु हुँदैन, दाँत कीराले खान्छ ।’
‘दाँत दुखेमा मात्र डाक्टरलाई देखाउन वा जँचाउन जानुपर्छ ।’
‘बच्चाको झर्ने दाँत त हो, त्यति महत्त्व हुँदैन ।’
‘दाँत बेलाबेलामा सफा गर्ने अथवा स्केलिङ गर्नाले दाँत कमजोर हुन्छ ।’
यस्ता कुरा दिनुहुँ धेरै मानिसको मुखबाट सुनिन्छ, जुन भ्रम एवं अन्धविश्वास मात्र हाे । यसमा कुनै वैज्ञानिक सत्यतथ्य पाइँदैन । यस्तो सोच राखेका कारण धरैलाई दाँत, गिजा एवं मुखसम्बन्धी समस्या बढेको पाइन्छ ।
सुनेको भरमा दाैडिनाले नयाँ पिँढीमा समेत दाँतसम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिने गरेकाे छ । र, उनीहरू दन्तचिकित्सककोमा धाउन बाध्य छन् ।
यस लेखमा दाँतको हेरचाह एवं उपचारप्रति भ्रम र यथार्थबारे प्रकाश पार्न खाेजिएको छ:
भ्रम १ : चकलेट एवं गुलियो खानेकुराले दाँत कीराले खान्छ
गुलियो खानेकुराले दाँत कीराले खान्छ भन्ने कुरा पूर्ण सत्य हाेइन । अर्थात् गुलियो खाएकै कारण दाँतमा कीरा लाग्छ भन्ने कुरा गलत हाे । कुनै पनि कार्बोहाइड्रेट भएको खाने कुरा जस्तै: भात, चिउरा, चिप्सहरू खानाले पनि कीरा लाग्न सक्छ ।
यस्ता कुरा खाएकै कारणले दाँत कीराले खान्छ भन्नुभन्दा पनि कति धेरै पटक यस्ता खानेकुरा खाइन्छ र कति समयसम्म ती खाना दाँतको कुनामा अड्केर बस्छन् भन्ने कुराले कीरा लाग्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ । यस्ता खाना खानेबित्तिकै पानीले मुख कुल्ला गर्ने बानी छ अथवा दाँत सफा गरिन्छ भने दाँतको बीचमा अड्केका खानेकुरा निस्कन्छन् र कीराले खाने सम्भावना घट्छ ।
जति लामो समय दाँतको कुनातिर यस्ता खानेकुरा टाँस्सिएर बस्छन्, त्यति नै मुखमा भएको व्याक्टेरियाले अम्ल बनाउँछ र कीरा लाग्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका साथै अम्ल भएको पेय पदार्थ जस्तै: कोक, पेप्सिकोलाहरूले दाँतको बाहिरी भागको इनामेललाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा दाँत कीराले खाने सम्भावनालाई बढाउँछ ।
भ्रम २ः दाँत दुखेको बेलामा मात्र दन्त चिकित्सककोमा जानुपर्छ
प्रायः हामी दाँत नदुखेसम्म अथवा दाँतसम्बन्धी कुनै समस्या नआएसम्म दन्त चिकित्सककहाँ जाने चलन छैन । दाँत कहिल्यै एक्कासि दुख्दैन अथवा दाँत दुखाइको सुरुवाती समयमा हामी सचेत हुँदैनौँ ।
त्यसैगरी, दाँतको दुखाइमा पनि विभिन्न चरण हुने गर्छ भन्ने जानकारी आममानिसमा हुँदैन । उदाहरणका लागि दाँतको बाहिरी भाग इनामेल हुन्छ । त्यसभित्रको भाग डेन्टिन र सबभन्दा भित्री भागलाई पल्प भनिन्छ । यो पल्प दाँतको नसा हो । तसर्थ दुखाइको महसुस यी चरण पार गर्ने क्रममा हुन थाल्छ ।
उदाहरणका लागि इनामेलमा जब कीराले खान थाल्छ, यसबेला खासै दुख्दैन र जब डेन्टिनमा यो समस्या पुग्छ, त्यसबेला दाँत सिरिङसिरिङ हुन थाल्छ । यसैगरी त्यो कीराले खाएको भाग जब दाँतको नसामा अथवा पल्पमा पुग्छ, त्यसबेला भने सहनै नसक्ने गरी दुख्न थाल्छ र चिकित्सककहाँ नगई सुखै पाइन्न ।
दुखाइ धेरै भएर चिकित्सककहाँ जानुपर्ने अवस्थाको अर्थ समस्या जटिल भइसकेको भन्ने बुझिन्छ । यस अवस्थामा उपचार गर्न समय लाग्नुका साथै खर्च पनि धेरै लाग्न सक्छ । तसर्थ समयसमयमा सकिन्छ भने हरेक ६/६ महिनामा दन्त चिकित्सकलाई जाँच गराउँदा अथवा उपचारमा जाँदा समस्याको पहिचान समयमा नै हुन सक्छ । यसले दुखाइ र खर्च दुवैलाई घटाउँछ ।
भ्रम ३ : बालबालिकाको दूधे दाँतको खासै महत्त्व हुँदैन
केटाकेटीको दूधे दाँत झर्ने त हो, नयाँ दाँत आइहाल्छ भनेर खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन । यस्तो सोच एकदमै गलत हो । दूधे दाँत झर्ने र नयाँ दाँत उम्रने एउटा खास उमेर हुन्छ, जुन छ वर्षदेखि १२ वर्षभित्रको उमेरभित्र साटिने प्रक्रिया भइसक्नुपर्दछ । तर, त्यस्ता दाँत कीराले खायो भनेर उपचार गर्नुको साटो दाँत फुकालिदिने गरिन्छ ।
यसो गर्नाले एकातिर बालबालिकालाई खानेकुरा चपाउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने अर्काेतिर राम्रोसँग चपाएर नखाएका कारण पोषण प्राप्त हुन सक्दैन । जसले गर्दा कुपोषण हुन जान्छ ।
त्यसैगरी, समय नपुग्दै दाँत फुकालिदिनाले दायाँबायाँका दाँतहरू सर्ने र नयाँ आउने दाँत दूधे दाँतले भन्दा ठूलो स्थान लिने भएकाले स्थान नपुगेर बाँङ्गोटेढो भई नराम्रो देखिन सक्छ । यस अवस्थाले धेरै बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर परेको देखिन्छ ।
आफ्नो नराम्रो दाँतका कारण रिसाउने, झर्काेफर्काे गर्ने, आत्मविश्वास कम हुने र अरुको अगाडि उभिएर बाेल्न नसक्ने हुन्छन् बालबालिका । तसर्थ उनीहरूको दूधे दाँत नआउँदैदेखि आमाले आफ्नो औंलाले थोरै दन्तमञ्जन लिएर गिजा सफा गरिदिने र दूधे दाँत आएपछि सानो ब्रसमा मटरको दाना जति फ्लोराइड भएको मञ्जन राखेर माँझिदिने र माझ्ने बानी गराउनुपर्छ । यसो गर्दा दाँतसम्बन्धी समस्यालाई कम गराउँछ ।
भ्रम ४ : स्केलिङ गरेमा दाँत हल्लिन्छ अथवा कमजोर हुन्छ
स्केलिङ भन्नाले मेसिनद्वारा दाँत र गिजाको सफा गर्ने प्रविधि हो । यस प्रविधिले गिजाभित्र र बाहिरको फोहोर सफा गरिन्छ । हरेक मानिसको मुखमा र्‍याल अथवा थुक, प्रोटिन र खाएको कुरा अड्किएर बस्ने गर्छ, जसलाई 'प्लाक' भनिन्छ । केही समयपछि यो प्लाक ढुङ्गाजस्तै बन्छ, जसलाई क्यालकलस भनिन्छ । यो साधारण तरिकाले दाँत माझ्दा बाहिर निस्कँदैन ।
लामो समयसम्म यो क्यालकुलस दाँतमा बस्दा यसले दाँतसम्बन्धी विविध समस्या जन्माउँछ । जस्तै: दाँत छिट्टै हल्लिने, गिजा तल सर्ने एवं रगत आउने, सास गन्हाउने, दाँतलाई सही ठाउँमा राख्ने ह्ड्डी कमजोर बनाउने इत्यादि । यसकारण यी प्लाक क्यालकुलस र दाँतमा बसेका कसलाई हटाउन हरेक छ महिनामा स्केलिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । स्केलिङ भनेको मेसिनद्वारा दाँत र गिजामा अड्केका फोहोरलाई भाइब्रेसनद्वारा सफा गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो भाइब्रेसनको प्रयोग गर्दा दाँत हल्लिने एवं कमजोर हुन्छ भन्ने सोच गलत हो ।
भ्रम ५ : मुख एवं दाँतको स्वास्थ्य अन्य शारीरिक स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्दैन
कतिपय रोग मुख एवं दाँतको परीक्षणपछि पत्ता लाग्ने गर्दछ । उदाहरणका लागि उच्च रक्तचाप वृद्धि भएको व्यक्तिमा गिजा सुन्निने, रगत आउने र दाँतको उपचार गर्दा धेरै रगत बहने हुन्छ । साथै, डायविटिज रोगीहरूको पनि गिजा कमजोर हुने, दाँत छिट्टै हल्लिने, मुखमा घाउहरू आउने र छिटो निको नहुनेजस्ता समस्याको पहिचान हुन जान्छ ।
त्यसैगरी दाँत झरेका तर नक्कली दाँत नहालेका व्यक्तिहरूमा खाना राम्रोसँग चपाउन नसक्लाले पाचन शक्ति कमजोर भई अन्य रोगहरू निम्तिन सक्छन् । यसर्थ दाँतको उपचार गराउनुअगाडि आफूमा भएका रोगका बारेमा जानकारी दिनु अनिवार्य हुन्छ किनभने रोगलाई लुकाउँदा दाँतसम्बन्धी उपचारका क्रममा जटिलता आउन सक्छ ।
भ्रम ६ : दाँत निकाल्दा आँखा कमजोर हुन्छ
दाँत उपचार गर्ने विविध प्रक्रियाले आँखालाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ भन्ने सोचमा कुनै सत्यता छैन । किनभने दाँत र आँखाको नसा छुट्टाछुट्टै हुन्छन् तर दाँतको उपचारका क्रममा लठ्याउने औषधिको प्रयोग गर्दा नाकवरिपरि र आँखानजिक एवं गाला सामान्य सुन्निएको महसुस हुन्छ । केही समयपछि यो सामान्य हुन्छ तर आँखामा असर पुर्‍याउँछ भन्ने चिन्तामा कुनै वैज्ञानिक आधार भने अहिलेसम्म पाइएको छैन ।
भ्रम ७ : दाँत चम्काउन अथवा सफा गर्न घोटेर दाँत माझ्नुपर्छ
दाँत दिनमा धेरै पटक एवं लामो समयसम्म माझ्दा साथै कडा ब्रसले माझ्दा दाँत सफा हुन्छ भन्ने सोच गलत हुन्छ । तपाईंको ब्रस छ महिना नपुग्दै छियाछिया भएर बदलिरहनु पर्नेछ भने दाँत माझ्दाकाे तरिका उपयुक्त भएन भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । साथै, ब्रसले दायाँबायाँ घोटेर माझ्दैमा दाँत सफा हुन्छ भन्ने विश्वास गलत हुन् । यसले दाँतको बाहिरी भागको इनामेललाई खियाउँदै लैजान्छ । सिरिङसिरिङ हुने समस्यालाई निम्त्याउँछ ।
दायाँबायाँ ब्रस घोट्नुभन्दा नरम ब्रसले तलमाथि गरेर दाँतका हरेक भाग, भित्रबाहिर र चपाउने भागलाई हल्कासँग माझ्नुपर्छ । उमेरअनुसार एवं दाँत र गिजाको बनावटअनुसार दाँत माझ्ने तरिका फरक हुने भएका कारण आफ्नो दन्त चिकित्सकको परामर्शअनुसार सही तरिका सिकेर अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
भ्रम ८ः बिहान उठ्नेबित्तिकै दाँत माझ्नुपर्छ
दिनको दुई पटक दाँत माझ्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर ठीक समयका बारेमा त्यति सचेत भएको भने पाइँदैन । दाँत माझ्नु भनेको दाँतको भागलाई खानेकुरारहित सफा राख्नु हो । यस कारण उठ्नेबित्तिकै दाँत माझ्नुभन्दा खाना खाइसकेपछि दाँत माझेर निस्कँदा दिनभरि मुखमा भएका किटाणुले एसिड बनाउन सक्दैन र दाँत कीराले खानबाट जोगाउन सकिन्छ ।
यसरी नै राति सुत्नुअगाडि दाँत माझ्नु उचित हुन्छ । सुतेको समयमा हाम्रो मुख सुक्खा हुन्छ र दाँतलाई कीराले खाने सम्भावनालाई बढाउँछ । सुक्खा हुँदा मुखभित्रको र्‍याल अथवा थुकको प्राकृतिक सफाइ प्रक्रियालाई अवरोध ल्याउँछ र छिट्टै दाँतमा खाल्टो पर्ने, कीराले खाने गर्दछ । यसर्थ अन्य समयमा दाँत माझ्न नमिल्दा कुल्ला भने अवश्य गर्नुपर्छ ।
दाँतसम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका अन्धविश्वासले अझै पनि हाम्रो समाजमा जरो गाडेको छ । यस्ता अन्धविश्वासको भ्रमलाई त्याग्न मुख एवं दाँतको स्वास्थ्यसम्बन्धी वैज्ञानिक चेतनाको आवश्यकता दन्तचिकित्सकहरूले महसुस गरेका छन् । यसका लागि विद्यालयहरूमा केटाकेटीलाई सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ ।
विशेषज्ञको मुखबाट दाँतको स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक उपायहरू र अभिभावकबीचकाे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै जाँदा दाँतसम्बन्धी विविध रोगहरूबाट समयमा नै बच्न सकिन्छ ।
(लेखक कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालमा कार्यरत छिन्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ७, २०७७, ०७:०७:००
डा. गुञ्जना रिमाल